7 Tallaabooyin loo Saarayo Qaybaha Xirfadaha Tiknoolajiyada Tilmaamaha | Eeg
New Xirfadaha xirfadaha waxaa looga baahan yahay in lala tacaalo sidii loo kobcin lahaa horumarinta hormarinta, tusaale ahaan, maamulka khayraadka barnaamijka, maamulka, heerka heerka gunnada, iyo wixii la mid ah. Su'aashu waxay tahay, "aniga ma ihiWakiilada T ayaa si haboon u diyaargaroobay oo ku filan xirfad leh si ay si macquul ah ugu xoojiyaan korsashada, fulinta, isticmaalka, iyo maamulka cusub ee soo cusboonaaday?
U diridda qaabdhismeedka xirfadaha IT ma aha ficil maskax kufilan ah inkastoo ay xaqiiq tahay in ay qaadato mas'uuliyadda, habeynta iyo hantida. Ugu dambeyn, waxay gacan ka geysan doontaa dib u soo celinta guud ee maalgashiga (ROI) ee ganacsiga. Waxaad ka fakari kartaa arrintan oo la mid ah kharashyada la xiriira hirgelinta niyad-jabka. Dib-u-cusboonaanta loola jeedo ugu dambeyntii wuxuu keenaa balaarinta kharashka wadarta (TCO), suurtogalka ah isticmaalka sarre ee hawlgalka (OPEX) iyo hoos u dhacay sanadka sirta ah (NPV).
Ka dib markaan ka fakarayo ka qaybgalka aan ka shaqeynayo ururrada IT-da si ay u soo diraan qaababka xirfadaha IT-ga, waxaan ku darey nidaamka todobo siyaabood oo muhiim ah ama marxalado marmar ah. Waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee soo noqnoqonaya waa tani waa nidaam qallafsan, taas oo tusineysa ficilku kama dhamaanayo talaabada toddobaad. Isbeddel joogto ah gudaha urur waa mid aan laga bixi karin. Qaabkan, hay'addu waa in badan oo ka mida dib u eegto sida xirfadaheeda IT-ga loo hagaajinayo jihada muhiimka ah ee ganacsiga. Mid kasta oo ka mid ah toddobada marxaladoodba waxaa looga hadlaa faahfaahin dheeraad ah.
Geedi socodka Todoblaha ah
Tallaabada 1: Go'aaminta jihada muhiimka ah ee ururka.
Tallaabada 2: Fahmaan muhiimadda haysashada xirfadaha saxda ah.
Tallaabada 3: Samee naftaada si aad u muujiso xirfadaha loo baahan yahay.
Tallaabada 4: Aqoonso xirfadaha loo baahan yahay.
Tallaabada 5: Qiimaynta Xirfadaha Xirfadaha.
Tallaabada 6: Dhaqdhaqaaqa farsamooyinka isdhaafka.
Tallaabada 7: Haysashada xirfadaha muhiimka ah.
Tan ugu muhiimsan, go'aaminta jihada ugu muhiimsan ee ururku waa xarun dhexe oo isbeddel ganacsi. Maxay tahay xaaladda mustaqbalka ee ganacsiga u eg? Xirfadaha IT-ga ayaa laga rabaa inay ka caawiso ganacsigu inuu fuliyo gobolkeeda mustaqbalka? Maxay yihiin wada-hawlgalayaasha ganacsiga ee ka imanaya ururka IT? Waa wax iska caadi ah ururada aragtida iyo filashooyinka cutubyada takhasuska ah si loola socdo kuwa ka tirsan ururka IT. Tallaabada ugu horreysa waxay ku saabsan tahay qaadashada caddaynta ku saabsan jihada ugu muhiimsan ee ganacsiga.
Muhiimadda haysashada xirfadaha saxda ah waxaa lagu qaddariyaa iyada oo loo marayo wadista ROI ee ganacsiga, la-hawlgalayaasha taageeraya iyo xoojinta hay'adda IT si loo xoojiyo jihada muhiimka ah ee ganacsiga. Haysashada xirfadaha saxda ah ee wakhtiga ugu fiican waxay dejinaysaa hay'adda IT-da si ay u gogol-xaaraan, u abaabulaan una hir-geliyaan kartida cusub ee isbeddelka ganacsiga. Haysashada xirfadaha saxda ah waxay ku saabsan tahay wax aan ka ahayn IT. U diridda qaababka xirfadaha IT-da waxay u baahan yihiin IT xirfadlayaasha si ay u yeeshaan isdhexgal dheeraad ah oo la xidhiidha unugyo khaas ah, waxay fahmaan ujeedooyinka ganacsiga iyo farsamada iyo inay bartaan saldhigooda asaasiga ah iyo waxyaalaha laga filayo. Isticmaal xirfadaha, tusaale ahaan, isgaarsiinta, gorgortanka, maamulka lamaanaha, maamulida maamulka, iyo maamulka xidhiidhka macaamiisha, waxay si tartiib tartiib ah muhiim ugu yihiin.
Intaad direysid Qaabka xirfadaha IT-ga, dedaalka ah in la sameeyo sidan oo kale waa in laga helaa dhamaan heerarka ururka oo ka yimaada kafaalo qaadid rasmi ah iyo marti-geliyeyaasha sababaha keena dhammaan bulshada oo dhan ee shakhsiyaadka ah aqoonsiga looga baahan yahay ficilka. Waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee xasuusinta waa in dirista a Qaab dhismeedka xirfadaha IT waa dhaqdhaqaaqa hagaajinta ururada iyo xirfadlaha iyo ma aha tallaabo tallaabo fulin ah. Fursadda ka baxsan ee dadka loo baahan yahay in geedi socodka ay dareemaan inay wax u dhimayaan shaqada, ka dibna way ka sii daran yihiin in diiradda lagu saaro barwaaqadeeda. Xaqiijinta tooska ah ee ku saabsan waxa la qabanaayo waa mid ka mid ah isbeddelka guusha ee muhiimka ah ee gudbinta qaababka xirfadaha IT-ga. Ururadu waxay si joogto ah ugu foorarsadaan iyagoo riixaya si ay u gudbiyaan qaababka xirfadaha IT-ga tan iyo markii ay isku dayeen ficil ahaan sida ficil ka baxsan sida looga hortagayo iskuduwidda jimicsigooda maalin kasta. Halbeegga guusha ee muhiimka ah wuxuu siinayaa dad waqti go'an oo waqtigooda guud ka go'an inay diraan nidaamka IT.
Horumarintani waxay u baahan tahay in la qaato gander qaybaha shaqada ee looga baahan yahay gudaha gudaheeda iyagoo u maraya dhulal kala duwan. Aqoonsiga xirfadaha muhiimka ah ayaa u ogolaanaya ururku inuu qiimeeyo gobolkiisa xaadirka ah iyo in la dhiso dowladiisa mustaqbalka. Waxaynu si buuxda u garanaynaa qaybo shaqeyn oo kala duwan oo leh xirfado badan oo loo baahan yahay inkastoo xaqiiqda ah in horumarkan ay muhiim tahay in la xoojiyo xirfadaha seddexda ilaa afaraad ee xarunta dhexe. Horumarkaasi wuxuu xoogga saaraa qaybaha shaqada, taas oo aan la mid aheyn mas'uuliyadaha mas'uuliyadaha. Ururadu waxay si joogto ah u xallilaan xaalad nasiib daro ah marka ay xoogga saaraan qaybaha shaqada ee hadda jira iyo kuwa dadku ku dhexjiraan gudaha qaybaha shaqaalaynta. Kala saaridda qaybaha shaqada iyo xirfadaha ee mustaqbalka ee gobolka waa in laga jajabiyaa dadweynaha guud ee hadda ku jira qaybaha shaqooyinka. Qaybaha shaqada waxaa lagu tilmaami karaa inay siiyaan hab aan firfircooneyn oo firfircooni ah oo ay dadku u socdaan iyagoo ka bilaabaya heer hal heer ka dib markaas xiga, ama xitaa dhinaca dhinaceeda, iskutalaabi kala duwanaanta shaqada.
Marka qaybaha shaqada ee mustaqbalka ee mustaqbalka lagu tilmaamey, istiraatiijiyadan soo socota waxay tahay inay sahamiso helitaanka xirfadaha tirada dadka tirada badan ee ururka. Maskaxda ku hay: Tani waa dhaqdhaqaaq horumarin xirfadeed, ee ma ahan tallaabada maamulka fulinta. Waxay awood u siisaa dadka inay kala soocaan xirfadahooda dillaacsan isla markaana waxay dejiyaan wajiga horumarinta xirfadlayaasha. Xirfadaha adag ee qiimaynta waa in ay ku daraan garashada xirfadaha dushiisa heer shakhsi, gudaha gudaha guud ee guud iyo ugu dambeyn dhammaanteed iyada oo loo marayo ururka IT-da oo dhan.
Hadda dadku waxay samayn karaan hagaajin iyo diyaarin qorshooyin lagu hagaajinayo xirfadaha muhiimka ah ee loo baahan yahay. Fahmida kartida xirfadaha hadda jira waxay awood u siineysaa hay'adda in ay si fiican u ogaato meesha hagaajinta iyo diyaarinta layliyada waa in ay ku hawlan tahay in ay ballaariso dhaqaalaha miisaaniyadda horumarinta iyo diyaarinta qorshooyinka kharashka. Xaaladaha xirfadaha si dhakhso ah looga baahan yahay, kani wuxuu ka caawiyaa ururku in uu doorto xirfadaha cusub ee loo baahan yahay in la helo iyada oo la soo iibsanayo ama lagu wareejinayo dadka haysta xirfadaha.
Tani waa bilowgii habraaca soo celinta ee xaddidaya godka xirfadaha. Marka ay dadku helaan xirfado cusub iyada oo loo marayo horumarinta iyo diyaarinta jimicsiga, waxay dib u qiimeyn karaan naftooda. Maaddaama isbedelka ganacsigu uu noqdo mid si tartiib tartiib ah u ah ururada, farsamadoodu waxay horumarin doonaan isla markaana waxay ku qasban yihiin isbeddelada dib-u-qaabeynta qaab-dhismeedkooda, foomamka, qaab-dhismeedka ururka, iyo wixii la mid ah. Taas awgeed, tani waxay u baahan tahay in la sii wado si ay u qiimeeyaan xirfadaha muhiimka ah ee ururka IT-da. Marka ururku ku guuleysto horumarkan si uu u gudbiyo nidaamka xirfadaha IT-ga, inta badan maalgashiga ayaa hadda la sameeyay.
Ururada IT waa inay damaanad qaadaan inay haystaan ​​xirfadaha saxda ah waqtiga ugu fiican si kor loogu qaado jihada ugu muhiimsan ee ganacsiga. Nidaamka xirfadaha IT-ga wuxuu fursad u siinayaa ururrada IT-da in ay go'aamiyaan heerkooda helitaanka iyada oo loo kala saaro meelaha ay ku yaalaan xirfadaha dareenka iyo dhisidda qaab dhismeed si ay u dhexgalaan godadkaas. Sida innovation, hirgelinta nidaamka xirfadaha IT waxay sii wadi doontaa in ay bixiyaan qaar ka mid ah dhiirigelinta ganacsiga iyada oo aan la sii wado mar kale waxay gacan ka geysaneysaa dhaqdhaqaaqa sii kordhaya.